प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमिकस क्युरीको किन आयो फरक-फरक राय ? - Nepalpatra Nepalpatra प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमिकस क्युरीको किन आयो फरक-फरक राय ? - Nepalpatra
प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमिकस क्युरीको किन आयो फरक-फरक राय ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरक-फरक राय प्रस्तुत पेश गरेका छन् ।